Sida loo Delete Old iCloud kaabta Online u s
> Resource > iCloud > Sida loo Delete Old iCloud ee kaabta faylasha
Tan iyo bixitaanka iCloud, dad badan waxay u isticmaalaan si ay u hagaagsan iCloud iyo xog gurmad ah oo ku saabsan qalabka ay macruufka. Waa hagaag, iCloud yimaado qiimo. Xitaa hore 5GB la for free, waxaa laga yaabaa in aan ku filan si loo badbaadiyo macluumaadka oo dhan marka aad leedahay qalabka macruufka dhowr. Markaasay aad u baahan tahay in uu lacag gaar ah oo ku saabsan kaydinta dheeraad ah sannad walba. Haddii aad rabto in aad lacag taas, sidoo kale waxaa jira jid sababta aan tirtirto gurmad iCloud jir ah oo bilaash ah ilaa meel aad xisaabta iCloud?
Delete iCloud gurmad files in tallaabooyinka
Next, aynu hubiyo sida in ay tirtirto files gurmad in aad xisaabta iCloud. Arrinta No aad qabtaan tallaabooyinka hoose si aad iPhone, iPad ama iPod taabto, habka saxda ah waa isku mid.
Fiiro gaar ah: Haddii aadan rabin in ay lumiyaan hayaan kuwa, waxaad dooran kartaa inaad kala soo baxdo oo waxaan iyaga ku badbaadin on your computer deegaanka. Riix halkan si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan soo degsado gurmad iCloud in computer.
Tallaabada 1. Raadi files gurmad aad iCloud
Si aan ku bilaabo, abuurtaan app Settings ku qalab aad. Markaa waa inaad aadaa iCloud> Kaydinta & kaabta> Maamul Kaydinta. Waxaa aad arki doonaa dhammaan faylasha gurmad ugu dambeeyay ee aad iPhone, iPad iyo iPod Touch, taas oo ku xidhan yihiin iCloud la ID isla Apple.
Tallaabada 2. Dooro gurmad ah aadan rabin oo tirtirto
Sida shaashadda oo muujinaysa kor ku xusan, waxaad ka arki kartaa oo dhan hayaan dambeeyay iyo kaydinta mid kasta. Waxaad riix kartaa wax kasta si loo hubiyo taariikhda faylka gurmad, si aad go'aan ka gaari kara oo mid ka weyn. Just guji ku yaal oo aad arki doonaa macluumaadka sida soo socota.
Haddii tani waa mid ka mid ah aad rabto in aad iska tuur, oo aad si toos ah u riixi kartaa ah "Delete kaabta" badhanka si ay u helaan waxa ay uga takhalusi aad iCloud. Ka dib markii laga faaiidaysanayo badhanka, aad arki doonaa fariimo ah weydiinaya IG aad rabto in aad dami gurmad iyo tirtirto dhammaan xogta gurmad u qalabka ka iCloud sida soo socota.
Fadlan xaqiijin by siyoodba "Dami & Delete", oo aad samaysay. Tusaalaha kor ku xusan, waxaan kaliya badbaadiyey 3.1 GB ee kaydinta ee aan xisaab iCloud. Hadda waad samayn kartaa adiga ku gaar ah account iCloud!
Download iCloud hayaan in computer
Haddii aadan rabin in aad tirtirto hayaan kasta, waxa kale oo aad dooran kartaa in aad kala soo bixi hayaan ay ka iCloud in computer ah. Sidaas, waxaad sii daayo kara lagu kaydin jiray oo aad iCloud oo aan lumin wixii macluumaad ah.
Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay si aad u hesho ah iCloud gurmad downloader: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Mac) . Software Tani waxay aad u saamaxaaya in ay soo bixi oo dhan hayaan ka iCloud in ay ku eegaan iyo badbaadin aad PC ama Mac. Download version maxkamadda hoose si aad u leeyihiin isku day ah markii ugu horraysay.
Tallaabada 1. Log in aad xisaabta iCloud
Marka socda barnaamijka, dhaqaaqo "kabsado iCloud File kaabta" on sare ee suuqa kala hoose. Markaas waxaad geli kartaa aqoonsiga Apple iyo password si ay u gasho in aad xisaabta iCloud.
Tallaabada 2. Download iyo iskaan ku hayaan iCloud
Marka aad gasho xisaabtaada, waxaad ka arki kartaa oo dhan hayaan iCloud ku qoran in uu furmo. Dooro mid ka mid ah oo guji "Download" badhanka si aad u hesho waxa lagala soo bixi. File ayaa lagala soo bixi waxa uu ku yaalaa kaliya on your computer iyo ka dib aad u tirtiri kartaa haddii aadan rabin. Marka dajinta dhamaato, waxaad bilaabi kartaa baaritaan si ay u soo saaro iyada oo badhanka scan.
Tallaabada 3. xogta iCloud on your computer Save eegista
Marka scan ka istaago, waxaad ku eegaan kartaa dhammaan xogta ku gurmad iCloud ah sida hoos ku qoran. Dooro wax kasta oo aad rabto oo dhan ama iyaga ka mid ah, oo ka dibna riix "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer ka mid ah.
Ka dib markii ay soo degsado iyo badbaadin xogta, waxa aad bilaabi kartaa in aad tirtirto oo dhan hayaan in aad iCloud si lacag la'aan ah lagu kaydiyo dheeraad ah oo hadda.